Hindiya ayaa magacowday safiir cusub
Wasaaradda arrimaha dibedda India (MEA) ayaa ku dhawaaqday inay safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya, inkasta oo dowladda India ay sheegtay inay fadhigeedu noqon doono caasimadda Kenya ee Nairobi sababo la xiriira walaaca safiirka.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee ANI, Dr Virander Kumar Paul ayaa buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa Waaxda Arrimaha Dibadda.
Paul hadda waa safiirka India ee Nairobi, jagadan waxaa la magacaabay Ogosto 10, 2020.
Sairka cusub wuxuu badalay Rahul Chhabra oo tan iyo bishii Diseembar, 2018 uu ahaa wakiilka Hindiya ee Soomaaliya laakiin wuxuu ku sugan yahay Nairobi.
“Dr Paul Virander Kumar, Wakiilka Sare ee India u fadhiya Kenya, waa mid loo aqoonsaday inuu yahay Safiirka xiga ee India ee USA ee Soomaaliya, Nairobina way noolaan laheyd,” Wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya ayaa tiri.
Dr Virander, oo ah diblomaasi asal diblomaasiyadeed leh illaa 1991, wuxuu horey u soo noqday Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Hindiya. Sidoo kale, wuxuu matalayay wadankiisa dalka Romania iyo Moldova.
Danjiraha ayaa lagu wadaa in todobaadyada soo socda uu yimaado caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si uu waraaqihiisa aqoonsiga ugu gudbiyo wasaarada arimaha dibada iyo madaxweynaha jamhuuriyada.
Xaaladda nabadgelyo ee magaalada Muqdisho oo aan la isku haleyn karin darteed, qaar ka mid ah wakiilada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa xaruntoodu tahay dalka Kenya oo kaliya ka qayb gala shirarka ka socda magaalada, kuwaas oo dhammaantood ku soo aadaya iyadoo xiriirka Nairobi uu xumaaday. iyo Muqdisho.